ဆုံဆည်းရာ: ယနေ့တိုက်ပွဲသတင်းများ (၁၁ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ယနေ့တိုက်ပွဲသတင်းများ (၁၁ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ဆုံဆည်းရာ ၁၁ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
မြန်မာစံတော်ချိန်.....ညနေ ၈ နာရီ ၁ မိနစ်
ညနေ(၇ နာရီ ၅၀ မိနစ်) ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲတွေ စတင်ဖြစ်ပွားပြီ...။ (ကိုးကား - shanland.org)
“At first, the 33rd was encircling us,” said an SSA officer, “but now reinforcements from Wanhai are encircling the 33rd. “The fighting is still raging at the time of this reporting,” he added.
ညနေ(၄ နာရီ ၁ မိနစ်) ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိ နအဖ တပ်ရင်းများ ကရင်နီပြည်တွင်းသို့ စစ်ဆင်ရေး စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ တပ်မ ၅၅ လက်အောက်ခံ ခမရ ၅၁၂၊ ခမရ ၅၁၁နှင့် ခမရ ၅၁၇တို့ ဖြစ်ကြပြီး လွိုင်ကော်မြို့နယ်နှင့် ရှားတောမြို့နယ်အတွင်း ကရင်နီတပ်မတော်များ လှုပ်ရှားနေသည့် ဒေသများ၌ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စတင် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (ကိုးကား - ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်))
နေ့လည်(၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်) နေပြည်တော်ကို ကယန်းပြည်သစ်မှ လူငယ်များ ဗုံးဖောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့် နေပြည်တော်နဲ့ နယ်မြေချင်းနီးသည် ကယန်းပြည်သစ် နယ်မြေကို နအဖစစ်တပ်မှ စစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဖြင့် နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
နေ့လည်(၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်) လတ်တလော ရောက်ရှိလာတဲ့ သတင်းများအရ မဲသဝေါလမ်းတွင် နအဖ စစ်တပ်များနဲ့ ကေအန်ယူ စစ်တပ်များ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
နေ့လည်(၁၂ နာရီ ၅ မိနစ်) ယမန်နေ့က ဖာမွန်မြို့နယ် အနောက်မြောက်ဖက် မဲ့သရွတ်တွင် စခန်းထိုင်ထားသော နအဖ အခြေစိုက်စခန်းတခုဖြစ်တဲ့ ခမရ ၃၄၀ ကို ကေအန်ယူ (ကေအန်အယ်အေ) အထူးတပ်ရင်း ၁၀၂ မှ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် ဘီလင်းမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျွန်းပင်ဝင်း၊ ၀င်းမောင်း မှာရှိတဲ့ နအဖ စစ်တပ်နဲ့ (BDF) နယ်ခြားစောင့်တပ် စခန်းတွေကို ကေအန်ယူ (ကေအန်အယ်အေ) အထူးတပ်ရင်း ၁၀၂ မှ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
နံနက်(၁၀ နာရီ ၂၁ မိနစ်) ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူး စောလားဘွယ်မှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်သားများကို ယခုလို ပန်ကြားလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မတရားမှုတွေကြောင့် တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲရပြီဖြစ်တယ်။ ဗမာ လူမျိုးအများစုအပါအ၀င် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တောင်တန်းပြည်မ မကျန် ပူးပေါင်းတော်လှန် ဆောင်ရွက်မှ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ရမယ်။ ကျနော်တို နဲ့အတူတူ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ တပ်မတော်သားများလည်း အမိမြေရဲ့ နေရာအနှံ့က ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက အနိုင်ကျင့်ခံ အညာခံရတဲ့ ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူ အင်အားစုအားလုံးလည်း လက်တွဲပါဝင် ပူးပေါင်းပြီး လက်တဆုတ်စာ နအဖ စစ်မိစ္ဆာ အာဏာရှင်တစုကို ပြည်ထောင်စုစိတ်အစစ်နဲ့ တော်လှန်ကြပါ။
နံနက်(၈ နာရီ ၃၈ မိနစ်) သျှမ်းပြည်တပ်မတော်မှ ဒီကေဘီအေအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တစောင် ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ထိုကြေညာချက်ကို ဖတ်ရှုရန် ယခုလင့်ကို နှိပ်ပါ။
နံနက်(၈ နာရီ ၁၈ မိနစ်) နအဖ ဘက်က ၉ ရက်နေ့ ဘုရားသုံးဆူ၊ မြ၀တီမြို့တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ စစ်တပ်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အပြန်အလှန် သတင်းတင်ပို့တဲ့ ကြေးနန်း စာတစောင် ယနေ့လည်း ထပ်မံ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ မနေ့တုန်းကလည်း ၈ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲအခြေအနေ ကြေးနန်းစာတစောင်လည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုကြေးနန်းစားစာက နအဖ စစ်တပ် ကြေးနန်းရေးသားပုံ ရေးသားနည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ တကယ့်ကြေးနန်းလား ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။ ကြေးနန်းစာကို ဖတ်ရှုရန် ယခုလင့်ကို နှိပ်ပါ။
နံနက်(၈ နာရီ ၆ မိနစ်) ဘုရားသုံးဆူဒေသတွင် ယနေ့မနက် ၄ နာရီကျော်က စပြီး တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒီကေဘီအေ ဘက်မှ တပ်ရင်း ၉၀၆ နဲ့ ၉၀၇ တို့ဖြစ်ပြီး နအဖ စစ်တပ် ဘက်မှ တပ်မ ၄၄ လက်အောက်ခံ ခလရ ၂၈၃ နဲ့ ခမရ ၄၀၅ တို့ တဖက်နဲ့တဖက် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေတာပါ။ ဘုရားသုံးဆူဒေသဘက်ကို နအဖ ဘက်မှ တပ်မ ၂၂ ကို စစ်ကူလွှတ်ထားလို့လည်း နောက်ဆုံးရ သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
နံနက်(၈ နာရီ ၂ မိနစ်) ဘုရားသုံးဆူဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲ သတင်းတကို ထိုင်းတီဗွီ ၃ မှ ယမန်နေ့ည ၁၀ နာရီက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ဗွီဒီယို သတင်းပါ....
နံနက်(၈ နာရီ ၀ မိနစ်) မြ၀တီနဲ့ ဘုရားသုံးဆူဒေသတွင် နအဖ စစ်တပ်များနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကို TVThai သတင်းဌာနမှ ယမန်နေ့ည ၁၀ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သွားတာပါ။
နံနက်(၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်)ဘုရားသုံးဆူ မြ၀တီအခြေအနေ သတင်းဆောင်းပါး... The Nation က မနေ့က နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ တင်ထားသည်ကို ဘာသာပြန်ဖော်ပြသည်။
ကန်ချနဘူရီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ တိုက်ပွဲများ သဲကြီးမဲကြီး ဖြစ်နေသည့်အလျာက် ဘုရားသုံးဆူတောင်ကြားရှိ အရေးအခင်းမှာလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ မြ၀တီမြို့တိုက်ပွဲမှာ လူအများအပြားသေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အဆိုပါ နယ်စပ်မြို့မှာ ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
မြ၀တီမြို့မှာ အေးဆေးငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် တနင်္လာနေ့က မဲဆောက်သို့ ထွက်ပြေးလာသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော (မြန်မာ) ဒုက္ခသည်များအား ထိုင်းအရာရှိများက မြ၀တီသို့ပြန်ပို့ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် (ထိုင်းနိုင်ငံ) တောင်ဘက်ခြမ်း ဘုရားသုံးဆူမြုိ့မှာ တိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဆက်လက်တင်းမာနေပြီး ထိုင်းဘက်သို့ အများအပြား ထွက်ပြေးလာနေကြသည်။ ကန်ချနဘူရီအနောက်ဘက် ဘုရားသုံးဆူ ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ အာပီဂျီ ဒုံးကျည်လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံအချို့ ကျရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အဆိုပါဒေသကို စစ်မြေပြင်အဖြစ် ထိုင်းဒေသခံအာဏာပိုင်များက ကြေငြာထားသည်။ သို့သော် ထိုင်းလူမျိုးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်သတင်းမရှိပေ။
လက်နက်ကိုင် မွန်နှင့်ကရင် ပူးပေါင်းအင်အား ၃၀၀ခန့်က ဘုရားသုံးဆူမြို့အား တနင်္လာနေ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို ပြန်ရဘို့အတွက် ဒုတိယနေ့မှာ မြန်မာစစ်သား ရာပေါင်းများစွာနှင့် ထပ်မံအားဖြည့်ခဲ့ရသည်။ နေ့ခင်းဘက်တွင် သေနတ်သံများ လက်ပစ်ဗုံးသံများ ဒုံးကျည်ပစ်သံများ မကြာခဏကြားနေသည်။ သတင်းရပ်ကွက်များ၏ ပြောဆိုချက်အရ ဘုရားသုံးဆူမြို့အား ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မြန်မာစစ်သားများ၏ အားထုတ်မှုမှာ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၏ ပြင်းထန်စွာ ခုခံမှုကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည်။
တိုက်ခိုက်နေသည့် ကရင်များမှာ ယခင်က ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည့် ကေအန်ယူနှင့် ဒီကေဘီအေတပ် ပူးပေါင်းအင်အားဖြစ်သည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
မနက်ပိုင်းတွင် အခြေအနေ ငြိမ်သက်နေသော်လည်း နေ့ခင်းဘက်တွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ထပ်မံဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းများစွာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာကြောင်း ဆန်ခလဘူရီခရိုင်အကြီးအကဲ ချန်မရာ့ ကန်းနွိုင်က ပြောသည်။
တိုက်ပွဲများ ထိုင်းဘက်သို့ ကျွံမလာစေရန် မြန်မာစစ်တပ် တာဝန်ရှိသူကို ဆက်သွယ်ပြောကြားထားကြောင်း ထိုင်းခြေမြန်တပ်မ ၉ တပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ်ထ၀မ် ရွမ်သီရိက ပြောသည်။ တိုက်ပွဲများ ထိုင်းဘက် ကျွံမလာစေရန် သတိထားမည့်အကြောင်း မြန်မာဘက်မှ သဘောတူသော်လည်း အခြေအနေ ပုံမှန်ဖြစ်သည်ထိ မြန်မာဒုက္ခသည်များကို စောင့်ရှောက်ထားရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်း ၄င်းတပ်မှူးကြီးက ပြောသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မြန်မာဒုက္ခသည်များကို ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေရာချထားပေးသော်လည်း ကန်ချနဘူရီမြို့သို့ သွားခွင့်မပြုဟု အဆိုပါ တပ်မှူးကြီးက ဆက်ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၆နှစ်ကာလအတွင်း တိုက်ပွဲကြောင့် ဇာတ်ိမြေက ထွက်ပြေးလာသည့် မြန်မာဒုက္ခသည် တသိန်းခွဲကို ထိုင်းက နေရာချထားပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမ၀င် အလုပ်သမားပေါင်းကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂ သန်းခန့်ရှိသည်။
မြ၀တီကို လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများလက်မှာ မြန်မာစစ်သားများ ပြန်ရယူပြီးနောက် မဲဆောက်မြို့မှာလည်း ထိုင်းအမှတ် ၃ စစ်တိုင်းဒေသ တပ်မတော်နှင့် ဒေသခံ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည့် မြန်မာဒုက္ခသည်များကို မနေ့က မြ၀တီဘက်သို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေနှင့် မြ၀တီမြို့၏ အချက်အချာနေရာများကို တနင်္ဂနွေနေ့က သိမ်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြ၀တီအခြေအနေ ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဟု ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မြန်မာဒုက္ခသည်များအား အကြောင်းကြားပြီးနောက် ပဋိပက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးလာသည့် ဒုက္ခသည် ၂သောင်းအနက် ၇၀ ရာနှုန်းက မြ၀တီပြန်ရန် ယမန်နေ့က သဘောတူခဲ့သည်။
သောင်ရင်းမြစ်ကို လှေနှင့်မဖြတ်ခင် ဒုက္ခသည် အတော်များများ မဲဆောက်ရှိ ထိုင်းနယ်ခြားရဲစခန်းမှ သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းဘက်သို့ ဆင်းသွားသည်ကို မြင်နေရသည်။ သူတို့ဆွေမျိုးအများအပြားကလည်း တဘက်ကမ်းမှ ကြိုနေသည်ကို မြင်နေရသည်။
သို့သော် မြ၀တီဘက် ပြန်ရမှာ စိတ်မချသေးသည့်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြန်မာဒုက္ခသည်များ (မဲဆောက်) ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကျန်နေသေးသည်။ မြန်မာဘက်မှ ပဋိပက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးလာသည့် ဒုက္ခသည်များအတွက် နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်စခန်းသစ် ဖွင့်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ခစ်တီ ဇဂ္ဂဘထ္တရ က ပြောသည်။
" ကျန်တော်တို့အနေနဲ့ အချိန်တိုကာလအတွင်းသာ လူလူချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီမျိုး ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ ပေါ်လစီချမှတ်ထားပီး အခြေအနေပုံမှန်ဖြစ်တာနဲ့ ချက်ချင်း (ဒုက္ခသည်တွေကို) ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ခစ်တီက ပြောသည်။ ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံအနေနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှာ မဟုတ်သလို မည်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျိုးကိုမှ ထိုင်းနယ်မြေတွင်း ခိုလှုံခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်းကိုပါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆွန်ခစ်တီက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနှစ် ၂၀အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲများ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပနေစဉ် မြ၀တီမြို့ အစိုးရအဆောက်အဦ အတော်များများကို ဒီကေဘီအေတပ်များ က သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျည်ဆန်ကုန်သွားသည့်အချိန်တွင် အဆိုပါ ကရင်တိုက်ခိုက်သူများမှာ တောင်ပိုင်းသို့ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားသည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
မြ၀တီတိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဘက်လုံးမှာ အကျအဆုံးများစွာရှိပြီး အရပ်သားအပါအ၀င် ဒါဇင်များစွာ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ သို့သော် အကျအဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မည်မျှရှိသည်ဆိုသည့် စာရင်းအတိအကျကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျိုးစီးပွားများကို ခြိမ်းခြောက်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးမှာ လူနည်းစုအဖွဲ့များ ပါဝင်ရမည်ဆိုသည့် မြန်မာစစ်တပ်၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ယခင်က စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံခဲ့သည့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့က မြ၀တီကို တိုက်ခိုက်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဘာသာပြန် - ဒေါ်ဘုတ်ဆုံ)
Posted by ဆုံဆည်းရာ at 8:18 AM
Labels: ဓါတ်ပုံ, ဗွီဒီယို, သတင်း
မင်းတို့ ဒီမိုတွေက ဦးဏှောက်လုံးဝမရှိပဲ . . အမြင်မတူတဲ့သူတွေကို ဖိနှိပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြတယ်။ မိမိလက်အောက်မှ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမိန့်ကို နာခံရပြီး လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ကြောက်နေရတာကတော့ NLD ဥက္ကဌ ရာထူးယူထားတဲ့ ဦးအောင်ရွေပါပဲ။ NLD မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စမှာ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ရွှေခမျာ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံ လုပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဥက္ကဌတစ်ယောက်ရဲ့ လေးစားမှုမခံရဘူး။ ပါတီတွင်းမှာ ဂိုဏ်းဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေက ဥက္ကဌကို ခွေးတစ်ကောင်လို အနိုင်ကျင့်ခဲ့ရတယ်။ ( သူကိုမကြိုက်ရင် ဥက္ကဌရာထူးကနေ ဖယ်ရှားပါ။ ဥက္ကဖြစ်နေရင်တော့ သူ့ရာထူးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လေးစားမှုကိုပေးရမှာပဲ။ သူရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူကြရမှာပဲ)
NLD မှတ်ပုံတင်ရေး ဆန္ဒမဲပေးရာမှာ ခြိမ်းချောက်မှုတွေလုပ်ပြီး ဗြောင်မဲ ပေးခိုင်းတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အဲလိုအခြေအနေမှာ လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးရမှာပါ။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ထောက်ခံမဲပေးရင် တိုက်ခိုက်ခံရမှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှု လုပ်နိုင်တော့မှလဲ? အဲလိုလူဆိုးလူမိုက်တွေလိုလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ တိုင်းပြည်ကို မအုပ်ချုပ်သင့်ဘူး။ ဒီမိုဘလော့တွေဟာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်မပေးသလိုပဲ .. . ဒီမိုငတုံးတွေဟာလဲ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ် ပြောဆိုတဲ့ လူ့ဘောင်ကို မလိုလားတဲ့သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
NDF က ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့တာပါ။ ဘေးထိုင်ဘုပြောမလုပ်ပဲ တကယ်ကို ဖာသည်မဗိုလ်ချုပ်တွေကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလဲ . . . . . ဒီမိုငတုံးတွေ ဦးဏှောက်မရှိတာကို သိလို့ လမ်းခွဲပြီး . . . ကြံ့ဖွတ်အဏာမရအောင် သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ လုပ်လိုက်ကြတာပါ။ ရယ်စရာကောင်းတာကတော့ . . . . ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားတော့ ပျော်ရွှင်သူတွေက စစ်ဗိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုငတုံးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောသလို မလုပ်ရလေသလားဆိုပြီး NDF ခံလိုက်ရတာကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီမိုငတုံးတွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားကင်းမဲ့ပြီး အောက်တန်းစားတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအပေါ် အဲလောက် သိမ်ဖျင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ထားရှိတဲ့ ဒီမိုတွေ အဏာမရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဖာသည်မဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
p.s. NDFလို ကြံဖွတ်အဏာမရအောင် ကြိုးစားသူတွေကိုတော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြပေမယ့် . . . . ကြံဖွတ်အဏာရအောင် တက်တက်ကြွကြွ ကူညီနေသော ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ဖို့အတွက် ယခုအချိန်အထိ လှုပ်ရှားမှု မစသေးပါ။ ကုလားတွေကလဲ သူတို့ ကုလားအချင်းချင်း နှာစေးနေသည်။
KNU, DKBA....ETC, THAN SHWE & BURMESE ARMY ARE ALL LOSER,THE WINNER IS MUSLIM A!SS HOLE.